असार १५ बाट कोरियाले नेपाली कामदार लैजाने, को–को जान पाउँछन् ?..पुरा पढ्नुहोस – Sidha Onlinepatra
मुख्य पृष्ठ /News/असार १५ बाट कोरियाले नेपाली कामदार लैजाने, को–को जान पाउँछन् ?..पुरा पढ्नुहोस
असार १५ बाट कोरियाले नेपाली कामदार लैजाने, को–को जान पाउँछन् ?..पुरा पढ्नुहोस
विश्वभर फैलिएको कोरोना महामारीका बीच कोरियाली नेपाली कामदारलाई दक्षिण कोरिया लैजाने भएको छ । त्यसको लागि नेपाल सरकारले अनुमति दिएको छ । आज आइतबार साँझ बसेको मन्त्रिपरिषदको बैठकले नेपाली कामदारलाई दक्षिण कोरिया जाने मार्ग प्रशस्त गर्ने निर्णय गरेको छ । दक्षिण कोरियाले लकडाउनकै बीचमा भएपनि माग अनुसार भाषा परिक्षण उत्तिर्ण गरेर बसेका कामदार लैजाने आशय व्यक्त गरेपछि सरकारले बाटो खोलेको जनाइएको छ ।
नेपाल र दक्षिण कोरियाको सम्झौता अनुसार इपिएस अन्तर्गतका भाषा परिक्षा उत्तिर्ण गरेर प्रतिक्षा सूचिमा रहेकाहरुलाई कोरिया लैजान अनुमति दिने निर्णय आज बसेको मन्त्रिपरिषदको बैठकले गरेको सूचना प्रविधि तथा सञ्चार मन्त्री तथा अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले जानकारी दिए । उक्त निर्णय अनुसार कोरियाली भाषा परिक्षा उत्तीर्ण गरेर बसेकाहरु मात्रै कोरिया जान पाउनेछन् ।मन्त्रिपरिषदको निर्णय सार्वजनिक गर्दै उनले जारी लकडाउन बिहिवार मध्यराति १२ सम्मका लागि बढाइएको जानकारी दिए । त्यसैगरी अन्तर्राष्ट्रिय सीमा नाकाहरु आवागमन स्थगन गर्ने निर्णय बैशाख ३१ गते मध्यरातिसम्मको लागि बढाइएको जानकारी दिएका छन् ।
काठमाडौं, १४ वैशाख । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीभित्र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई अध्यक्ष र प्रधानमन्त्री दुवैबाट हटाउने तयारी भएको छ । त्यसका लागि उनीविरुद्ध प्रभावशाली नेताहरु एकजुट भएका छन् ।ओलीले एकपछि अर्को विवादास्पद काम गरेको भन्दै अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, वरिष्ठ नेताहरु झलनाथ खनाल र माधव नेपालका अलावा उपाध्यक्ष वामदेव गौतम एक भई हटाउने तयारीमा लागेका हुन् । हिजो बालुवाटारमा उपाध्यक्ष वामदेव गौतमले ओलीलाई तत्काल राजीनामा दिएर बालकोटमा आराम गर्न भनेपछि तयारीको योजना प्रष्ट खुलेको हो ।
१२ वैशाखमा गौतमले भैंसेपाटीस्थि घरमा पाँच जना सचिवालय सदस्यहरुको बैठक डाकेर ओलीलाई सरकारबाट हटाउने योजनालाई अन्तिम रुप दिएका थिए । त्यसको भोलिपल्ट बालुवाटारमा ओलीले नेकपा नेताहरुलाई एक्ला एक्लै डाक्दा हक्की स्वभावका गौतमले सरकारबाट हट्न भनेका थिए । उनले तत्काल स्थायी कमिटि बैठक डाक्न समेत भनेपछि ओलीले नमान्ने वित्तिकै राजीनामा दिन भनेका थिए ।गौतमले ओलीबाट पार्टी पतन हुने खतरा बढेको भन्दै कुनै हालतमा हटाउनुपर्ने जोड गरेको निकट स्रोतले जानकारी दियो । ओली इतरको बैठकमा गौतमले अब अति भयो भनेर पार्टीलाई जोगाउन ओलीलाई हटाउनुपर्ने भनेका थिए । अन्य नेताहरुले प्रक्रिया पुर्याएर अगाडि बढ्नुपर्ने बताएका थिए ।ओलीले ल्याएको अध्यादेश उनकै लागि घातक बनेपछि अप्ठ्यारोमा परेका हुन् । सचिवालयमा ओली अल्पमतमा परेका छन् । स्थायी कमिटिमा उनलाई माधवकुमार नेपालको साथ नभए अप्ठ्यारोमा पर्न सक्छन् ।
आफूविरुद्ध सचिवालयका अधिकांश सदस्य लागेपछि ओलीले विश्वासपात्रहरुलाई सक्रिय बनाएका छन् । ईश्वर पोखरेल, सुवासचन्द्र नेम्वाङ, शंकर पोखरेल, महेश बस्नेतलगायत नेताहरु ओलीको बचाउमा सक्रिय भइसकेका छन् । उनीहरुले लकडाउनमा पनि भेटघाट तिव्र पारेका छन् ।यसैगरी, ओलीले आफूलाई हटाउने तयारी तिव्र भएको थाहापाएपछि बालुवाटारमै भेटघाट बाक्लो बनाएका छन् । उनले निकटस्थ र असन्तुष्टलाई डाकेर छलफल गर्न थालेका छन् । उनले कुनै हालतमा राजीनामा नदिने र सबैलाई देखाइदिने भनेको बुझिएको छ । गौतमसँगको बालुवाटारमा भएको विवादमा पनि ओलीले देखाइदिने चेतावनी दिएको स्रोतले बतायो ।
पुर्व मिस नेपाल मलिना जोशीले सार्वजनिक गरिन यस्ता तस्बिर
रामायणमा रावणको भूमिका निभाउने अरविन्द त्रिवेदीको निधन ? यस्तो रहेछ वास्तविकता
सरिता गिरीको घरमा कालोझण्डा गाडियो
पत्रकार कृष्ण पाण्डेको सम्झनामा न्युज २४ ले गर्यो यति ठुलो घो’षणा